Archives »Hodges University
Sokajy: Hetsika ho an'ny fiaraha-monina
Afaka manampy ianao! Fanangonana ny rivodoza Dorian ho an'ny Bahamas
Stilwell Enterprises sy Hodges University Manatevin-daharana ny ezaka fanampiana any Bahamas Ny rivo-doza Dorian dia nandrava an'i Bahamas, ary mila fanampiana mafy ireo mponina ao. Ny tobin'ny Fort Myers sy Naples ao amin'ny Hodges University dia tranonkala fidinana ho an'ny ezaka fanampiana an'i Bahamas. Ireo entana izay angoninay dia hoentina mivantana mankany Bahamas, nahazoana lalana avy tamin'ny Stilwell Enterprises. Hodges [...]	Hamaky bebe kokoa
Mpiasa ao amin'ny oniversite Hodges dia manome kilalao 500 ho an'ny kilalao ho an'ny Tots
Mpiasa ao amin'ny Oniversite Hodges dia manome kilalao maherin'ny 500 ho an'ny kilalao ho an'ny Tots isan-taona, mankalaza ny fialantsasatra ny mpiasan'ny oniversite Hodges amin'ny fanomezana ankizy. Tamin'ity taona ity dia nanokatra malalaka ny fony izy ireo ary nanome kilalao 500 mahery ho an'ny Kilalao ho an'ny Tots. "Mampientam-po ny fahalalahan-tanan'ireo mpampianatra sy mpiasa rehetra ao aminay", hoy ny Dr. John Meyer, filoha, [...]	Hamaky bebe kokoa